जुलियो सेसर क्यानो। इन्स्पेक्टर मोनफोर्टका निर्मातासँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: जुलियो César Cano। फेसबुक प्रोफाइल।
जुलियो सेसर क्यानो, निरीक्षकको निर्माता बार्टोलोम मोनफोर्ट, बाहिर आउनुहोस् तपाईंको क्विन्टो शीर्षक मामला मृत्युसमेत छ. कास्टेलनमा सेट गरिएको श्रृंखला पछाडि जारी रहन्छ प्लाजा डे ला फरोलामा हत्या, भोली, यदि भगवान र शैतान चाहन्छ भने, तपाईं यहाँ भैदिए हुन्थ्यो y मृत फूलहरू। यस पटक प्लट को परिणाम को वरिपरि घुमाउँछ एक arsonist को स्वीकारोक्ति र तीन बाल्यकालको साथीहरूको पुनर्मिलन।
१ 1965 XNUMX मा जन्मिएको, क्याप्लैडेस (बार्सिलोना) मा, जुलियो César Cano एक संगीतकारको रूपमा काम गरे पछि लेख्न थाले र प्रबन्धक समूहहरूको छ र चेन सफलता भन्दा बढि केहि गरेको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद समय र दयालु तपाईंले मलाई दिनुभयो यो अन्तर्वार्ता.
जुलियो César Cano - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: तपाईंले भर्खर एक नयाँ उपन्यास जारी गर्नुभयो, मृत्युसमेत छ। तपाईं हामीलाई यसमा के भन्नुहुन्छ?
जूलियो CÉSAR क्यानो: यसमा पाँचौं किस्त इन्स्पेक्टर मोनफोर्टको श्रृंखलाबाट, म आफैलाई चरित्रको जुत्तामा हाल्ने कोशिश गर्दछु जो बाल्यकाल र वयस्कताको बीचमा फसेका छन्। उपन्यासले मानिसमा रहेको हानिकारक शक्तिसँग काम गर्छ, कस्तो किसिमको आकर्षणले अर्धविन्दुलाई दुर्भाग्यको ज्योति उज्यालो पार्न प्रेरित गर्दछ, एक थानटोस्टेटिसियनको अज्ञात पेशाको लागि, जो लासको लुगा लगाउन समर्पित छ ताकि उनीहरूका आफन्तहरूले तिनीहरूलाई जीवनमा झैं झुक्याउन सक्नेछन्, र पैतृक तीर्थयात्राको। स्वास्थ्य, शान्ति र वर्षाको लागि एक व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्न।
जेसीसी: मलाई थाहा छैन, यो जटिल छ, तर यो पक्कै पनि हुनेछ बच्चा वा युवा विषयवस्तुको साथ केहि। म हास्य र हास्य पढ्दछु, म तिनीहरूलाई मन पराउँछु। मैले लेखेको पहिलो कथा मलाई या त याद छैन। यो पक्कै पनि थियो लेखन स्कूल को लागी व्यापक।
जेसीसी: मलाई थाहा छ उनीहरू चकित भए जुल्स भेर्न उपन्यास. २००० पानीमुनि यात्राको लीगहरू o पृथ्वीको केन्द्रको यात्रा। संसारको दुर्गम स्थानहरूमा सेटिंग्स को लागी कि म आफैं पढ्न मा स्थान को लागी एक नक्शा मा खोजे।
जेसीसी: सूची अंतहीन हुनेछ, तर म जूलियो उद्धृत गर्नेछु भेर्न, जेन अस्टेन, अगाथा क्रिस्टी, आर्थर कोनन डोयल, मेरी शेली ... र केहि समकालीनहरू: इयान रान्किन, जुसी एडलर-ओल्सेन, शार्लोट लिङ्क, पत्रुस May, मानुएल भोज्केज मोन्टलबेन ...
जेसीसी: म सँधैको चरित्रबाट मोहित भएको थिएँ शर्लाक होम्स.
जेसीसी: म यस सम्बन्धमा पागल होइन। एक राम्रो कम्प्युटर स्क्रीन वा उपयुक्त नोटबुक, केहि भन्दा बढि presbyopia को लागी। मानसिक शान्ति, एक सानो संगीत, थोरै।
JCC: घरमा, कुनै पनि समयमा, समस्या छैन।
JCC: राम्रो साहित्य, लि gender्गको पर्वाह नगरी। मलाई सामान्य रूपमा पढ्न मन पर्छ।
जेसीसी: अहिले म पढ्छु मार्कस प्रभाव, विभाग क्यू श्रृंखलाबाट, बाट जुसी एडलर-ओल्सेन। म पहिलो नोट तयार गर्दैछु इन्स्पेक्टर मोनफोर्टको छैठो किस्त.
जेसीसी: लेखन विश्वासको एक कार्य हो, र एक राम्रो प्रकाशकमा प्रकाशन लगभग चमत्कार हो। भाग्यवश lपाठकहरु राम्रो र राम्रो हुँदैछ, र त्यो राम्रो संकेत हो। हामी बाँच्ने समय पछि के बाँकी छ हेर्नेछौं।
जेसीसी: म कल्पना गर्न चाहन्छु कि के हुँदैछ भन्नेले सेवा पुर्‍याउँछ हामी राम्रो मान्छे हुन, अधिक सहयोगी र दयालु। तर यो मलाई पूर्णतया स्पष्ट छैन। त्यो कुनै पनि अवस्थामा मेरो इच्छा हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » जुलियो सेसर क्यानो। इन्स्पेक्टर मोन्फोर्टका सिर्जनाकर्तासँग अन्तर्वार्ता